West Mercia Police - Halkaan af Soomaali ku hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Crimestoppers, ay ku jirto sidii aad u heli kartid turjubaan markaad soo wacdo.
Halkaan af Soomaali ku hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Crimestoppers, ay ku jirto sidii aad u heli kartid turjubaan markaad soo wacdo.
Waxaan nahay hay'adda keliya ee samafalka oo ku caawiso xallinta dembiyada & qabashada dembiilayaasha. Crimestoppers wuxuu leeyahay lambar telefoon oo si magac la'aan ah loo waci karo - 0800 555 111 - sidii aad ku wargeliso waraka ku saabsan dembi. Markii aad soo wacdo lambarkaan, looma baahna inaad soo sheegto magacaaga iyo macluumaadkaaga shakhisyeed. Wacitaanada telefoonkaan ma la baari karo. Waxaa la heli karaa adeeg turjubaan oo magic la'aan ah haddii aadan ku hadlin Ingiriis.
Waxaan rabnaa inaad noo sheegto wixii aad ogtahay ee ma doonayno inaan ogaanno magacaaga.
Waxaad wici kartaa lambarkaan - 0800 555 111 - 24 saacadood maalintiiba & 7 maalmood toddobaadkiiba. Crimestoppers wuxuu ka shaqeeya dalka UK oo dhan.
Lambarka telefoonka wuxuu bixiyaa adeeg jaaliyadeed oo qiimo wayn leh, sidii qof walba ee war ka haayo dembi ama fal dembiyeed ay u soo gudbiyaan ayagoo ka wel-welaynin ciqaab. Dembilayaal badan waxay ka faa'idaystaan cabsida ay dadka qabaan sidii ee uga hortagaan xabsi. Lambarka magic la'aanta ee Crimestoppers wuxuu awood dadka u siinayaa inay warar soo gudbiyaan ayagoo ka wel-welin inyy wax ku dhaco.
Wacitaan walba waxaa loola dhaqmaa si magac la'aan ah sidii uu qofna u ogaanin aqoonsiga qofka soo wacaha. Abaalmarin ayaa la hela & la baxshaa ayadoo aan la wax-yeelaynin magac la'aanta soo wacaha.
Macluumaadka aad na siido waxaa loo gudbin doonaa booliiska. Waa hab fudud & sugan ee dembiilayaasha maxkamad lagu geeyo, ayadoo la ogaanin meeshu u warka ka yimid.
Haddii aadan ku hadlin af Ingiriis ama haddii Ingiriisigu uusan ahayn luqaddaada koowaad, waxaad weli soo wici kartaa lambarka telefoonka Crimestoppers:
Soo wac 0800 555 111
Waxaa waxitaankaaga qaban doono qof ku hadla af Ingiriis. Waa inaad u sheegtaa luqadda aad ku hadasho
Waxay markaa kaa codsan doonaan inaad sugto intii ay ka wacayaan turjubaan. Kani wuxuu ku qaadan karaa xoogaa dhaqiiqo ah, laakin fadlan telefoonka ha dhigin. Waxaad luqaddaada ku maqli doonta farriin, lagugu codsanaayo inaad sugtid ilaa turjabbaan laga helo
Turjubaanka ayaa soo geli doono khadka & kaa codsan doono inaad u sheegto macluumaadka ku saabsan dembi ee aad rabto inaad gudbiso. Waxaa suurtogal ah inay kaa codsadaan wax yar oo su'aalo ah. Kani waxaa loogu talagalay in lagu hubiyo inaan haysano malcluumaadka oo dhan ee aan u baahan nahay sidii aan u baarno dembiga ama dembiilaha ee aad soo sheegtay
Markaad isticmaalayso adeeggaan turjubaanka, waciddaada waxay weli ahaanaysa mid magac la'aan ah
Mar mar, turjubaan lama heli karo. Haddii ay sidaan dhacdo, soo wac saacad kale ee maalinta. Wixii ka dambeeya 10ka habeenimo ayaa ah saacad fiican ee la soo waco.